निर्मला हत्याकाण्ड : अब के हुन्छ अनुसन्धान ?::समायोजन खबर
निर्मला हत्याकाण्ड : अब के हुन्छ अनुसन्धान ?
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको आरोपमा २४ दिनपछि प्रहरीले मुख्य अभियुक्तका रूपमा भीमदत्त नगरपालिका–१९ का दिलिप विष्टलाई गत ४ भदौमा सार्वजनिक ग¥यो ।
तर, निर्मलाको शरीरमा भेटिएको प्रमाणको डीएनए रिपोर्ट दिलिपसँग नमिलेपछि उनी मंगलबार साधारण तारेखमा रिहा भए । दिलिप रिहा भएसँगै निर्मलाको हत्यारा को हो भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । प्रहरीकै अनुसन्धान झुटो साबित भएपछि प्रहरीमाथि थप चुनौती बढेको छ ।
दिलिप र निर्मलाको डीएनए प्रोफाइल नमिलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सरकारी वकिलको कार्यालयको परामर्शपछि उनलाई मंगलबार रिहा गरेको जनाएको छ । दिलिपसँगै बम दिदीबहिनी पनि रिहा भएका छन् । दिदी अनिता बमलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटी एवं दिलिप र बहिनी रोसनीलाई साधारण तारेखमा प्रहरीले मंगलबार रिहा गरेको हो ।
छोरी निर्मलाको हत्या भएको ४६ दिन भइसक्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेको र प्रहरीले नै अपराधीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै न्यायका लागि निर्मलाका बुबा यज्ञराज र आमा दुर्गादेवी मंगलबार काठमाडौं पुगेका छन् ।
निर्मला हत्या प्रकरणलाई सुरुबाटै सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने प्रहरी नै दोषी देखिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार परिषद्को टोली, नेपाल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव एवं कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिको टोली, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का डीएसपी अंगुर जीसी नेतृत्वको टोली, कञ्चनपुरका राजनीति दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकारलगायतले आजसम्म केही तथ्य पत्ता लगाउन नसकेपछि अनुसन्धान कता जाने हो ? कौतुहलको विषय बनेको छ ।
हत्याको घटना अनुुसन्धानमा आलोचित बनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का, प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ ।
सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिलाई १५ दिनभित्र घटनाको प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दियो । मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदन अझै सरकारसमक्ष पेस नहँुदा कतिपयले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको म्याद थपिनुमै आशंका गरेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारीमा रहेका बेला विष्टको डीएनए रिपोर्टलाई पर्खन १५ दिन म्याद थप गरेपछि सदस्य केसीले असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । तर २४ घण्टा नबित्दै उनी पुनः समितिमा फर्किए ।
गृह मन्त्रालय र आफ्नो समेत वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको भन्दै कर्तव्यबोध गरी काममा फर्किएको’ उनले बताएका छन् । यसको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ । आफन्तले छानबिन समितिको म्याद थपेर घटना बिर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
घटना विवरण हेर्दा प्रहरी अधिकृत र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भूमिकामाथि गहन अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ । हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समितिले पनि तत्कालीन प्रहरीको अनुसन्धानमा त्रुटि रहेको बताएको थियो । यो पाटो प्रहरी अनुसन्धानमा किन परेन ? धेरैले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
सीआईबीको अंगुर जिसी नेतृत्वको टोलीले पनि निर्मला घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरेको छ तर त्यतिबेला अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी अंगुर जिसीको टोलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग हुन थालेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा जनताले एसपी डिल्लीराज विष्ट र भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट नै दोषी भन्दै नारबाजी गरे । त्यसबाहेक अंगुर जीसी र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई पनि प्रदर्शनकारीले दोषीका रूपमा दाबी गरे ।
एसपी डिल्लीराज विष्ट र सीआईबी डीएसपी अंगुर जीसीका कारण बल्झिएको अनुसन्धान डीएनए परीक्षणपछि सोझिएको छ ।
किरण विष्ट र आयुस विष्टको बयानबाट अगाडि आएका राजन बुढाऐरसहितका व्यक्तिको समेत डीएनए परीक्षण गरिने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।
यातनाका सिकार स्थानीय
विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएपछि स्थानीयले वास्तविक हत्यारा लुकाउन प्रहरी लागिपरेको भन्दै आन्दोलन गरे । आन्दोलन चर्कँदै गएपछि तत्कालीन प्रहरी र पछि गएका एसपी कुवेरसिंह कडायतको टोलीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भयो । घटनामा १२ जना घाइते भए ।
निर्मलाको हत्या गरी शव फेला परेकै दिन प्रहरीले ११ साउनमा उल्टाखामकै स्थानीय चक्र बडूलाई पनि पक्रेर ११ दिनसम्म यातना दियो । प्रहरीले चक्रसँगै १५ वर्षीया उनकी बहिनी लक्ष्मी र ११ वर्षीय भाइ गौतमलाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।
बहिनी र भाइलाई सोही दिन छाडिए पनि चक्रलाई भने हिरासतमा मानसिक यातना दिएर राखियो । ११ दिनपछि उनलाई प्रहरीलाई गालीगलौज गरेको भन्दै सार्वजनिक मुद्दा लगाएर छोडियो ।
१२ साउनमा प्रहरीले दीपक नेगी र जीवन घर्तीमगरलाई पक्राउ ग¥यो । तर, पछि दीपक गम्भीर प्रकृतिको यौनरोगले ग्रस्त भएको पत्ता लाग्यो । जीवन मानसिक रोगी भएको खुलेपछि दुवैलाई छाडियो । प्रहरीको यति फितलो अनुसन्धानका आधारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसद्मा दीपक र जीवनको नामै लिएर अपराधी पक्राउ परिसकेको दाबी गरे ।
त्यस्तै, प्रहरीले १८ साउनमा स्थानीय जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२ मा पढ्ने १७ वर्षीया किशोरी हेमन्ती भट्टलाई पक्रेर पाँच दिनसम्म यातना दियो । हिरासतमा खुट्टामाथि र टाउको तल पारेर यातना दिएपछि तत्कालीन एसपी डिल्ली विष्टले निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेको बयान दिन दबाब दिए ।
आफन्त पुरुषहरूसँग मिलेर अपराध गरेको बयान दिन नमाने जीवन बर्बाद गराउने धम्की एसपी विष्टले दिएका थिए । वडाध्यक्षसहित कलेजका विद्यार्थी गएर हेमन्तीलाई बल्ल छुटाए ।
गत १० साउनमा साथी रोशनी बमको घरबाट घर फर्किरहेकी निर्मलाको ११ साउन बिहान उखुबारीमा शव भेटिएको थियो । हत्यारा पत्ता नलाग्नु प्रहरीमाथि ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ ।
घटनामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका बम दिदीबहिनीसँग प्रहरीको ठूलै सम्बन्ध छ भन्ने स्थानीयको शंका छ । बालिका हत्यारा लुकाउन वा बचाउनमा प्रहरी र अन्य कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुको हात रहेको स्थानीयको शंका छ । तर प्रहरीले भने अझै मुख खोलेको छैन ।
प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको तयारी
निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा ‘झुटो’ अनुसन्धान गर्दै नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही हुने भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद र अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही सिफारिसका लागि एसएसपी उत्तमकुमार सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् भने अन्य प्रहरी अधिकारीको भूमिकाबारे अनुसन्धान जारी छ ।
प्रहरी अधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि आन्तरिक छानबिन भइरहेको प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्री बताए । यसअघि मंगलबार साँझ गृह मन्त्रालयमा बसेको गृहमन्त्री, सचिव, आईजीपीलगायत उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले पनि अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले पनि निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीको भूमिका गैरजिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । छानबिनका क्रममा दोषी देखिए प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीयदेखि अन्य कानुनी कारबाही पनि हुन सक्ने प्रहरी प्रवक्ता क्षत्री बताउँछन् ।
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सीआईबीका कम्तीमा एक दर्जन प्रहरीकर्मी बर्खास्त हुने सम्भावना बढेको छ । उनीहरुलाई हिरासतमा लिएर थप अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रालयले तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
निर्मलाका आमाबुबा काठमाडौंमा
छोरीको हत्या भएको ४६ दिन भइसक्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेको र प्रहरीले नै अपराधीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै न्यायका लागि निर्मलाका बुबा यज्ञराज र आमा दुर्गादेवी मंगलबार काठमाडौं पुगेका छन् । १० जना महिला अधिकारकर्मीका साथ उनीहरू काठमाडौं गएका हुन् ।
उनीहरूले दोषी पत्ता लगाई निर्मलालाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग राखेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी मुख्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने भएका छन् ।
‘अहिलेसम्म दोषी बचाउने खेल मात्र भयो । छोरीले न्याय पाउनेमा विश्वास नलागेपछि न्यायका लागि आग्रह गर्न काठमाडौं आएको छु,’ यज्ञराजले भने ।
अनुसन्धानमा फर्किए केसी
निर्मला पन्तको हत्या छानबिन गर्न गठित सरकारी छानबिन टोलीका उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसी काममा फर्किएका छन् ।
राजीनामा दिएको तीन दिन नहुँदै निर्मला पन्तको हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित निर्मलालाई न्याय नमिल्ने भन्दै राजीनामा दिएका केसीले तीन दिन नहुँदै जिम्मेवारीमा यथावत् फर्केर काम गर्ने भएका छन् ।
गृह मन्त्रालय र आफ्नो समेत वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको भन्दै कर्तव्यबोध गरी काममा फर्किएको बताए ।
घटनाबारे धारणा एउटै भएको तर बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भएका कारण बुझाइमा फरक आएको रहेछ एजेन्डा एउटै हो र उद्देश्य एउटै हो भने किन एकाकार नहुने भनेर म समितिमा फर्किएको हुँ,’ उनले भने ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा बसेर निर्मलालाई न्याय दिलाउन नसकेपछि समितिमा बस्नुको औचित्य नभएको दाबी गर्दै उनले दुई दिनअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
राजीनामा घोषणाका क्रममा उनले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आफूलाई सुरक्षा महसुस भएको भन्दै जीउ–ज्यानको सुरक्षाको माग गरेका थिए ।
गृहमन्त्री थापाले सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आफू समितिमा बसेर छानबिन समितिले गर्न बाँकी अनुसन्धान गर्न तयार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जिकिर गरे । तर उनले राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि पनि आफूलाई सुरक्षा ‘थ्रेट’ दिने व्यक्तिका बारेमा खुलेर केही बताउन सकेनन् ।
छानबिन समितिभित्र रहेको मतान्तरबारे पत्रकार सम्मेलनमा खोल्न जरुरी नभएको जिकिर गर्दै उनले समितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना कुरा नसमेटिए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताए ।
विरोधमा कालो तीज
निर्मला हत्याकाण्डको विरोधमा महिला दबाब समूहले बुधबार सदरमुकाम महेन्द्रनगरको स्थानीय मदनचोकमा कालो सारी पहिरिएर तीज मनाएका छन् । हत्या घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सुरुवातबाटै आन्दोलनरत आमा समूह फेरि आन्दोलित बनेका छन् ।
। निर्मलाका हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बलात्कारीलाई फाँसीको सजायका लागि संविधान संशोधन गर्न दबाब दिन कालो सारीमा तीज मनाउन लागिएको महिला दबाब समूहकी संयोजक हेलेन श्रेष्ठले बताइन् ।
समाचार,तस्बिर पत्रकार शुरेश पन्तकेा सहयेागमा
विराटनगरका होटल तथा लजमा प्रहरीको छापा, ५६ जना नियन्त्रणमा
कर्तब्य ज्यान मुद्दाका फरार कारागार चलान